किन मर्छन चितवन निकुञ्जका गैंडा? – AayoMail
किन मर्छन चितवन निकुञ्जका गैंडा?
आयाेमेल संवाददाता २०७७ असोज २३ गते ७:२३
भदौ २१ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्र नवलपरासीको रातोघोलमा टाउको र ढाडमा चोट लागेको अवस्थामा गैंडा भेटियो। अन्दाजी २५ वर्षको भाले गैंडा शिकारीले मारेका थिए। चितवनमा ६ वर्षपछि चोरीशिकारीबाट गैंडा मरेको यो पछिल्लो घटना थियो।
‘टाउकोमा गोली लागेको जस्तो चोट भएको र ढाडमा चोट भएको मृत गैंडा भेटिएको थियो,’ चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले भने, ‘गैंडाको शव सडेको अवस्थामा भेटिएको थियो। शिकारीले नै मारेको अनुमान गरेका छौँ।’ खाग भने सुरक्षित थियो।
त्यसयता असोज १६ आइसल्यान्ड क्षेत्रको सेराघोलमा गैंडाको अवशेष भेटियो। ढिलोगरी भेटिएको गैंडाको लैंगिक अवस्था र उमेर पहिचान हुन सकेन। प्राविधिकले प्राप्त अवशेष हेरेर पनि उमेर र लैंगिक अवस्था आकलन गर्न सकेनन्। तर, बुढ्यौली कारणले मरेको हुनसक्ने अनुमान उनीहरूको छ।
लगत्तै भोलिपल्ट (असोज १७ गते) नवलपुरको गण्डक ब्यारेक नजिक नारायणी नदीको शिवालय घाट छेउमा ३५ वर्षको पोथी गैंडा मृत भेटियो। नारायणी नदी पार गर्ने क्रममा बाढीले बगाएको निकुञ्जको अनुमान छ।
त्यसको पर्सिपल्टै असोज १९ गते निकुञ्जमा दुईवटा गैंडा मृत भेटिए। एउटा गण्डक ब्यारेक नजिकै बाल्मिकी पोथी गैंडा मरेको भेटियो। अर्को गैंडा सौराहामा मरेको अवस्थामा फेला पर्‍यो। बाल्मिकिमा भेटिएको पोथी गैंडालाई नारायणीको बाढीले बगाएको अनुमान छ।
सौराहा सेक्टर अन्तर्गत वनकट्टा वनगछियाको बाटोको ढिकमा उँधोमुन्टो अवस्थामा गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। १२ वर्षको भाले गैंडाको प्रकृति हेर्दा एकआपसमा जुँधेर मरेको हुनसक्ने अनुमान छ। गैंडाको पछाडिको खुट्टा भाँच्चिएको थियो।
यसैगरी, असोज २१ गते नवलपुरको भेलौजीस्थित नारायणी नदिकिनारमा एउटा गैंडा मृत भेटियो। डुंगा गस्ती टोलीले अन्दाजी १५ वर्षीय गैंडा मृत अवस्थामा फेला पारेको थियो।
निकुञ्जको गजग्राह पोष्ट नजिक नदीमा डुबेको अवस्थामा भेटिएको गैंडाको खाग र खुर सुरक्षित नै थिए।
यसरी चितवन निकुञ्जमा हरेक महिना गंैडा मृत फेला पर्न थालेका छन्। साउन यता निकुञ्जमा ८ वटा गैंडा मृत भेटिएका छन्।
चितवन निकुञ्जका सूचना अधिकारी अशोक रामका अनुसार बाढीले बगाएका गैंडा मृत फेला परेका हुन्। निकुञ्ज र यसको मध्यवर्ती क्षेत्र वरपर गैंडा फेला परिरहेका छन्।
तीन महिनामा प्राकृतिक कारणले ७ र एउटा गैंडा चोरीशिकारका कारण मृत भेटिएको उनले बताए।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १३ वर्षमा २ सय ४५ गैंडा मृत भेटिएका छन्। त्यसमध्ये ११ प्रतिशत चोरीञशिकारीबाट मरेको र तीन प्रतिशत विद्युतीय तारका कारण गैंडा मरेको रामले बताए। प्राकृतिक कारण मर्नेको संख्या ८७ प्रतिशत छ।
चितवन निकुञ्जमा गैंडाको चोरीशिकारी पनि प्रमुख समस्या थियो। तर, पछिल्ला सात बर्षमा एउटा गैंडालाई शिकारीले मारेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ यता २५ वटा गैंडा चोरीशिकारीबाट मरेका छन्। सो वर्ष प्राकृतिक कारण ८ वटा गैंडा मर्दा ९ वटालाई शिकारीले मारेका थिए।
२०६६/६७ मा १० गैंडा शिकारीको हातबाट मरे। २०६७/६८ मा दुई र त्यसपछि २०७१ सम्म प्रत्येक वर्ष एउटा÷एउटा गैंडालाई शिकारीले मारेको पाइन्छ।
चोरीशिकारबाट गैंडा मारिने क्रम घट्न थाले पनि प्राकृतिक कारणबाट मर्नेको संख्या बढिरहेको छ। यो अवधिमा २ सय १३ गैंडा मरेका छन्। १३ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा पछिल्लो पाँच वर्षमा गैंडा मर्ने क्रम तीव्र छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा धेरै ४३ गैंडा प्राकृतिक कारण मरेका थिए। त्यसपछि गत आर्थिक वर्ष र २०७४/७५ मा समान २६, २०७३/७४ मा २५ वटा मरेका छन्। गत आर्थिक वर्ष दुईवटा गैंडा विद्युतीय धरापमा परेर मरेका थिए।
पछिल्लो समयमा बाढीका कारण गैंडा मर्ने क्रम बढेको चितवन निकुञ्जका प्रमुख बरालले जानकारी दिए। ‘गैंडा आहाल बस्न र पानीमा खेल्न मन पराउने जीव हो। आहाल बसेको समयमा बाढी आउँदा दलदलमा फस्ने गर्दछन्,’ उनले भने, ‘अहिले पानी घट्दै गएपछि नदी बगाएका र दलदलमा फसेरर निस्कन नसकेका गैँडा मृत भेटिएका छन्।’
अझै पनि झाडी र दलदलमा गंैडा फसेकाले उद्धार जारी रहेको उनले बताए।
चितवन निकुञ्जमा ६ सय ५ वटा गैंडा छन्। गैंडाको बासस्थान अध्ययनमा निकुञ्जको ४५० वर्ग किलोमिटर मात्रै गैंडाका लागि उपयुक्त बासस्थान रहेको देखाएको छ। गैंडाको संख्या अनुसार यो क्षेत्रफल न्यून हो।